Avast Secure Browser isagaa iska Bilaabay: Sida Looga Fogaado Ama Looga Saaro | Madasha Mobile -ka
Avast Secure Browser ayaa Iskiisa Bilaabay - Sida Looga Fogaado ama Looga Saaro
Cristian Garcia | | Barnaamijyada, Amniga
que Avast Secure Broser kaligiis ayuu bilaabmaa Waa wax laga xumaado marka la eego waayo -aragnimada isticmaale ee kombiyuutarkaaga markaad ciyaareyso, shaqeyso ama daawato filim kasta, sax? Tani waxay u baahan tahay in la saxo. Avast sida oo kale waa antivirus wanaagsan oo kaliya mararka qaarkood, waxay leedahay cayayaanka sidan oo kale ah oo xoogaa nasiib -darro noqon kara. Xaqiiqdii Avast waxaa iska leh Avast Antivirus Group, oo ah shirkad taas wuxuu u heellan yahay jidh iyo naf si loola dagaallamo furin iyo fayrasyo ​​kale oo aan ka heli karno intarneedka oo waxyeello u leh kombiyuutarkeena sidaas darteedna nabadgelyadeena.
Waxaa la dhihi karaa in shirkadani ay hore u ahayd khabiir arrimaha ka hortagga fayraska. Gaar ahaan, waxay ku shaqeysaa aalado kala duwan, sida taleefannada gacanta, laptops iyo kumbuyuutarro shaqsiyeed. Dhab ahaantii hadda waa la dhihi karaa sidaas Avast waa mid ka mid ah antivirus -yada aadka loo isticmaalo meeraha. Sidaa darteed, waad ku farxi doontaa inaad maalin walba isticmaasho oo aad ammaankaaga gacantooda kaga tagto, laakiin khaladaadka sida Avast Secure Browser oo keligiis bilaaba, ayaa laga yaabaa inay ku waalayaan daqiiqado badan. Taasi waxay leedahay xal waxaadna ka heli doontaa (rajo ahaan) maqaalkan.
Macluumaad dheeri ah haddii ay dhacdo inaad tahay isticmaale Avast oo aadan aqoon, waa inaad ogaataa inay jiraan laba nooc Avast, kan bilaashka ah iyo midka ay ugu yeeraan Pro, kaas oo la bixiyo. Asal ahaan farqiga u dhexeeya iyaga ayaa ah in nooca pro uu lahaan doono dhammaan cusboonaysiinta Avast isla markiiba oo aan dhibaato lahayn, si toos ah. Tani waxay ka dhigi doontaa aaladdaada, wax kasta oo ay tahay, had iyo jeer waa ka badbaado wixii cusboonaysiin furin ah. Marka lagu daro Browser -ka caanka ah ee Avast Secure Browser, kaas oo ah mawduuca aan su'aal ka qabno oo aan ognahay in isticmaaleyaal badan ay cabashooyin ahaan u yihiin biraawsar si ay keligood u bilaabaan.
Waxaan halkaas u aadnaa iyada oo leh xalal kala duwan dhibaatada ah in biraawsarkaan cusub ee Avast keligiis bilaabo oo u adeegsado kheyraadka kala duwan kombiyuutarkaaga.
1 Xalka Avast Secure Browser kaligiis ayuu bilaabmaa
2 Ka saar barowsarka Avast Secure Browser
3 Avast Secure Browser ma furi doono?
Xalka Avast Secure Browser kaligiis ayuu bilaabmaa
Si loo hagaajiyo dhiqlahaan, iyo ka hor intaan la bilaabin in la tirtiro, waxaan isku dayi doonnaa inaan hagaajinno laga bilaabo maareeyaha hawsha. Si aad u gasho maamulaha hawsha, waa inaad riixdaa, sidaad horeba u ogtahay, kontaroolada + wareejinta + badhamada baxsiga, ama sidoo kale ka soo gal kontoroolka + alt + tirtir oo ka dooro ikhtiyaarka maareeyaha hawsha menu ka muuqda.
Waa hagaag, waxaan nahay gudaha maareeyaha hawsha. Hadda tag ikhtiyaarka bilowga ee maamulaha, liiskaas waxaad ku arki doontaa dhammaan codsiyada lagu rakibay kombiyuutarkaaga gaarka ah. Hadda iyaga dhexdooda, ka raadi midka loo yaqaan Avast oo mar haddii aad haysato, ku riix badhanka midig ee jiirka oo guji curyaami ikhtiyaarka. Waxaad ku haysaa sawirka kore haddii ay dhacdo inay si fiican u caddeyso sida loo sameeyo. Dabcan, waxay kuugu soo bixi doontaa Isbaanish.
Sidan ayaad ku xaqiijin doontaa in biraawsarka aaminka ah ee Avast, Avast Secure Browser uusan bilaabmin kaliya marka aad bilowdo nidaamka qalliinkaaga, taasoo ka dhigaysa wax walba inay si tartiib tartiib ah u bilaabaan oo aad lumiso waqtiga nolosha sabab la'aan. Sidaa darteed, haddii tani adiga kuu shaqaysay, waxaan u tixgelin karnaa ciladda in biraawsarka aaminka ah ee Avast laftiisa uu ku bilowdo sidii go'an. Haddii ay dhacdo in aan la hagaajin oo ay dib u bilaabato, waxaan sii wadi karnaa ka saarista biraawsarka. Waxaan ku bari doonaa qaybta xigta.
Ka saar barowsarka Avast Secure Browser
Qaabkii hore uma shaqeynin adiga, marka waxaan isku dayi doonnaa inaan ka saarno si ay u joojiso dhibka nagu haya markaan bilawno kombuyuutarkeena iyo wax walba, si aad u joojiso isticmaalka kheyraadka adiga oo aan fasax naga haysan. Wax aan dammaanad qaadno ayaa ka dhigaya in kombiyuutarkaaga shaqsiyeed uu gaabis noqdo. Si aad u tirtirto Avast Secure Browser waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda:
Waa inaan furno qaabeynta nidaamkaaga hawlgalka Windows, taasna waxaa la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo furayaasha Guul + I. Waxa kale oo aad ka heli kartaa liiskaas bilowga hore, codsiyada. Waad ogtahay, hab dhaqameedka laga soo bilaabo menu-ka hoos-u-dhaca. Ma jirto si loo lumo.
Sida loo joojiyo Avast si aysan kuu dhibin
Gudaha ma ku jirtaa? Waa hagaag markaa waa waqtigii la raadin lahaa oo la tirtiri lahaa. Ka hel Browser -ka Avast Secure Browser liiska codsiyada la rakibay. Hadda sii wad si aad meesha uga saarto. Tani waa inaad gujisaa badhanka uninstall. Waxa kaliya oo ay tahay inaad raacdo tillaabooyinka caadiga ah ee ka saarista barnaamijyada oo dhan sidaasna waxaad awood u yeelan doontaa inaad ka takhalusto biraawsarkaan aaminka ah ee Avast oo aad kaaga xanaajinaya. Way ka baaba'aysaa nidaamka oo mar dambe ma arki doontid marka aad bilowdo nidaamka hawlgalkaaga maalin kasta.
Avast Secure Browser ma furi doono?
Waxaa laga yaabaa inay si fiican kuugu shaqayso guud ahaan oo aadan doonayn inaad ka fujiso, laakiin guuldarradu waxay tahay inaysan furin, oo ka soo horjeedda kor ku xusan. Markaa waa inaad isku daydaa hab kale oo aan ahayn waxay ku xiran tahay inaad soo degsato barnaamij dhinac saddexaad ah oo nadiifiya diiwaanka. Miyaanay u muuqan sida barnaamijyadaasi u shaqeeyaan? Waxaan ku sharxaynaa sida loo sameeyo faqradaha soo socda.
Antivirus bilaash ah oo loogu talagalay Windows 10
Waa inaad ka raadsataa barnaamijyada Google raadinta "Nadiifiyeyaasha Diiwaanka". Markaad haysato taada, waxaad samayn doontid waa waxa barnaamijyadaas oo dhammi sameeyaan, iskaan nidaamka qalliinkaaga oo wuxuu heli doonaa dhammaan faylasha uu biraawsarkayaga aaminka ah, Avast Secure Browser, u adeegsado inuu ku bilaabo. Marka la ogaado, barnaamijku wuxuu dayactirayaa (ama waxaan rajaynaynaa) diiwaanka bilowga xiga.
Asal ahaan waxa barnaamijyadani sameeyaan waa nadiifinta dhammaan khaladaadkaas bilowga iyo faylasha kharribmay ee waddooyinka ka dhigi kara barnaamijkaaga su'aasha ah inuusan awoodin inuu bilaabo. Waxaad ka faa'iidaysan kartaa barnaamijkan aad soo dejisay si aad u nadiifiso faylasha uu Avast ka tago oo jiifa. Way kuu fiicnaan doontaa adiga iyo wax walba.
Ma ka heli kartaa barnaamijka nadiifiyaha diiwaanka Google? Waxaan kaaga tagaynaa liis ay ku qoran yihiin kuwa ugu caansan:
Nidaamka daryeelka sare
Defenderbyte Computer Optimizer
Nadiifiye Nadiifiye ah
Waxaan rajeyneynaa inaan xallinnay dhibaatadaada in biraawsarka aaminka ah ee Avast keligiis bilaabmayo oo haddii aadan lahayn, waxaad ku faalloon kartaa sanduuqa faallooyinka ee hoose, aad uga sii qoto dheer, waxa ku dhacaya biraawsarka si aan u baarno. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka soo socda!
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Barnaamijyada » Avast Secure Browser ayaa Iskiisa Bilaabay - Sida Looga Fogaado ama Looga Saaro
Sida loo sameeyo calaamadda weyn ama loo simanyahay ≥ ee kiiboodhka
Sida loo tirtiro koontadaada Twitch oo bilaash ah oo joogto ah